Madrid Akwụkwọ Ochie na Ochie. Na-agagharị n'etiti ọla. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ihe omume, Akwụkwọ
Paseo de Recoletos. Madrị. Foto (c) Mariola Díaz-Cano.
Otu afọ ọzọ Oge mgbụsị akwụkwọ nke Akwụkwọ ochie na nke ochie nke Madrid. Ọ malitere na Tọzdee gara aga September 27 na-agwụ na 14 maka October. Ọ bụ ugbua Agba 30th achọtara ya
na Recoletos Walk. Nwa 38 oche site na ụlọ ahịa akwụkwọ na Spain. Ana m emefu ha niile
afọ ndị m nwere ike. Nke a bụ ala ala site na nleta m ụbọchị ole na ole gara aga.
1 Oge mgbụsị akwụkwọ nke Akwụkwọ ochie na nke ochie nke Madrid
2 Ije ije n'etiti ọla, ndị lanarịrịnụ na ebe nchekwa
3 Yabụ ọ bụrụ na ịnọ na Madrid ...
Oge mgbụsị akwụkwọ nke Akwụkwọ ochie na nke ochie nke Madrid
Nhọrọ ọdịnala na ọkara nke Ọktọba, na-ahazi site na Jotù Viejo Booksellers Association, LIBRIS. Na-abaghị uru, e hiwere ya na 1988 ma ugbu a nwere ndị na-ere 37 akwụkwọ sitere na Spain niile. Kwa afọ ọ na-ebipụta akwụkwọ nke akwụkwọ ọgụgụ gbasara mmasị na nke a A njem site na Spain, nke Saturnino Calleja dere. Ọ bụ ndezi fsimile site na edeziri na mbụ 1922 nke ahụ gụnyekwara ihe osise, foto, eserese na map ndị na-eme ka ọ maa mma. Obi abụọ adịghị ya, aha kwesịrị ekwesị iji chọọ mma ma ọ bụ mee ikwe ka ọ dị ugbu a.
Mana enwere ọtụtụ ihe n'etiti Ọkara nde akwụkwọ sitere na akwụkwọ ndekọ aha akwụkwọ nke ụlọ ahịa na Spain niile. Ya mere, anyị na-achọta akpa mbipụta, incunabula, ihe odide mbụ, etchings na mbipụta ndị a na-adịghị ahụkebe. Ma n'ezie kwa ndị na-atọ ọchị, akwụkwọ mmado, mbipụta ochie, ihe osise, lithograph, nka njikọ, post o mgbasa ozi na akwụkwọ mmado ihe nkiri.
Ije ije n'etiti ọla, ndị lanarịrịnụ na ebe nchekwa
Afọ abụọ gara aga, amalitere m njem na blog a y otu n'ime isiokwu mbụ m Ọ bụ maka akwụkwọ edemede a na-eme kwa afọ na mgbụsị akwụkwọ Madrid. Na 2017 enweghị m ike ịgafe, mana afọ a agara m. Ọ bụ Thursday 27, ụbọchị ya mmeghe, n'etiti ehihie. M na-eme oge tupu m gaa nzukọ ọmụmụ ihe na mbipụta akwụkwọ na lere anya n'ozuzu. Ma ọ zuru.
Mmetụta ahụ bụ otu oge ọ bụla: obi ụtọ, agụụ, isi, ncheta, ahụmịhe na mmasị. Maka akwụkwọ ochie ndị ahụ ma ọ bụ akwụkwọ ochie. Maka ndu ha biri nke ha na-eme ma mee ka ndị ọzọ na ndị ọzọ biri. N'ihi ihe ha nwere ike ịpụta na mkpali site n'ile anya na mkpuchi ha, na-emetụ ụdọ ha, na ikekwe karịa ihe niile, na-eku ume na isi ha, nke ahụ bụ njirimara akwụkwọ akwụkwọ na-acha odo odo, nke inks adịla mbụ.
Nke ahụ n’ebe ahụ, mgbe ọ gbasara akwụkwọ ya, nwere aka karịa nke a. Ihe ndị ahụ bụ kaadiboodu na-enwe ahụ efe. Ndị ahụ, ndị nke ama mkpuchi na-acha anụnụ anụnụ na-agbanwe agbanwe nke Editorial Aguilar. Na shelf dị n’azụ bụ nnukwu mpịakọta nwere ụdị ọla edo na mkpịsị akpụkpọ anụ siri ike. Nnukwu akwụkwọ akwụkwọ nkà ihe ọmụma, ndị na-ese ihe osise, na nke nkà.
Ma e nwekwara ndị nke ị na-atụ ụjọ imetụ n’ihi na ọ dị ka ha ga-aghọ ájá naanị site na itinye mkpịsị aka gị na ha. Ndị kacha eti ihe na ndị njem, ma ọ bụ ndị nwere obere ihu ọma na ndị nwe ha ma ọ bụ ebe izu ike ha. Mbibi nke otu narị ọgụ, nke ha na-agbakwunye afọ ha na-agagharị ụwa n'etiti aka elebara anya ma ọ bụ ihe ọjọọ, aka enweghị isi ma ọ bụ aka amaghị. Survivedfọdụ lanarịrị ọkụ na ihere, a hapụrụ ndị ọzọ, mana ha chọtara onye nwe ọhụrụ.
N'etiti ndị na-enweghị isi bụ ndị na-emebi emebi bụ ndị ochie. Na-eyi mkpuchi nke kpebisiri spikes, adịkwaghị agbapụta. Ihe niile nwere ụda sepia nke enweghị obi ebere n'oge dị n'etiti peeji nke ya na-enweghị ngwụcha na nke ọtụtụ n'ime anyị mụtara ịgụ. Fọdụ na-ete ụkwụ site na isi nri. Ndị ọzọ na-ejide ụdị ahụ ma ọ bụ na wrinkles adịghị echekwa ya.
Mbipụta ndị ahụ n'akpa uwe agafewokwa nke ha onye na-egwe ọka na-ada ụda mgbe ị meghere ha. Na-atụ ụjọ na peeji ndị ahụ ga-agbasa. A na-ejikọzi paragraf ndị a na-eme otu otu. Azụ azụ nwere ike ịgbanwe na odo, nchara nchara, ma ọ bụ ude. Dị nnọọ ka aka. Ihe anaghị adị iche bụ isi.
All, enweghị isịneke na n'agbanyeghị ọtụtụ ọrịa, na-agwakọta na a oké nzukọ nke ahụ na-eme ka ha zukọta site n’ọtụtụ ụlọ ahịa akwụkwọ na Spain maka ụbọchị ole na ole. Ha si na Barcelona, ​​Granada na Seville, si Pamplona na Salamanca. Ha na-asụ asụsụ ndị ọzọ na-ebikọ n'enweghị nsogbu. Ya mere enwere mbipụta pụrụ iche nke Onye Na-emegide Kraịst nke Nietzsche dere, n’asụsụ German, n’akụkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi n’Akwụkwọ Nsọ. N'ebe ahụ ha na omenala kachasị nke Paseo de Recoletos. Madrid nwere ike ịgbazinye ha ebe ebe obi ha kacha.
Ma ọ bụ nke pekarịsịrị ha kwesịrị. Ha na-ebu n'ime akụkọ nke obodo niile, mba na agwa niile nke ụwa niile ma ha na-aga n'ihu igosipụta, kuziere ha ma kesaa ha. N'ime otu puku n'ụdị, agba na nha. Ha nọ na ọnụ ahịa ego, ọ bụ ezie n'eziokwu na ọ nweghị onye nwere ọnụahịa ọzọ. Ma ọ bụ na ọ karịrị akarị ịnwe ọtụtụ ihe gbasara ha yana gbasara onwe anyị.
Yabụ ọ bụrụ na ịnọ na Madrid ...
… Can't gaghị akwụsị ịga. N'ezie Ọ bụrụ n ’ịbụ onye na - agụghị akwụkwọ n’enweghị ọgwụgwọ, nhọpụta ahụ bụ iwu na enweghị mgbaghara naanị n'ihi ihe ike nke ike majeure. Mana ikwesighi ka ị ga-ejegharị ma jiri nkeji ole na ole soro anyị biri ngwa ngwa, nrụgide na ọgbaghara. ka ndị amamihe a dị ogologo ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ihe omume » Oge mgbụsị akwụkwọ nke Akwụkwọ ochie na nke ochie nke Madrid. Na-agagharị n'etiti ọla.